हट्यो उद्धार र नियमित उडानमा यात्रु कोटा, सस्तो होला त भाडा ? – Mission Khabar
हट्यो उद्धार र नियमित उडानमा यात्रु कोटा, सस्तो होला त भाडा ?
मिसन खबर २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०६:१०
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ नियम अनुसार दैनिक २ देखि ३ हजारसम्म यात्रु नेपाल आउने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । अब सरकारले खोलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक (नियमित) उडानतर्फ थप एयरलाइन्सले अनुमति मागेमा उडान अनुमति पाउनेछन् । उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र श्रममन्त्रीबीचको छलफल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शबाट उडान थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । पीसीआर नेगेटिभ भएका मात्र यात्रु ल्याउने गरी नियमित उडान खुला भएको मुलुकमा पीसीआर र क्वारिन्टिनसम्बन्धी नियमलाई यथावत राखेर कोटा हटाइएको छ । कुनै कम्पनीले कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल ल्याउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका हकमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँगको समन्वयमा उडानको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए ।
थोरै मात्र एयरलाइन्सले उडान भरेको, दोहोरो यात्रु बोक्न नपाएको कारण देखाउँदै एयरलाइन्सहरुले यात्रुसँगै महंगो भाडा असुलिरहेका छन् । उडान भाडामा ठगिएको गुनासो बढिरहँदा यात्रुको कोटा खारेज गरेको सरकारले टिकट भाडामा देखिएको महंगी नियन्त्रण गर्ला त ? अहिले विदेशमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किने उडानको प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरुले यही प्रश्नको जवाफ कुरिरहेका छन् ।